गाली गर्दा ‘गैंडा’ !
बिहीबार, साउन २२, २०७७
गाली गर्दा ‘गैंडा’ ! दीपकराजको गालीबाट जन्मिएको नाम
राधिका अधिकारी शुक्रबार, साउन १६, २०७७
काठमाडौं– निर्मल शर्मा उर्फ ‘गैंडा’ नेपाली सिने क्षेत्रमा चर्चित छ । निर्मलले नेपाली कलाकारितामा करिब २५ वर्ष याेगदान गरे । यस बिचमा निर्मलले ठूलो पर्दा, टेलिसिरियल, विज्ञापन तथा म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरिसके । चलचित्र, पात्र र कथाअनुसार उनले फरक फरक नाम पाए । तर, उनलाई आज पनि दर्शकहरुले ‘गैंडा’का नामले चिन्छन् । यो नाम उनलाई हास्य टेलीशृंखला ‘तीतोसत्य’ले दिएको हो ।
‘तीतो-सत्य’को ५०औँ शृंखलाको छायांकन हुँदै थियो । त्यतिबेला ‘तीतो-सत्य’को छुट्टै क्रेज थियो । तीतोसत्यका दीपकराज गिरी उनको अफिसमा काम गर्ने स्टाप, निर्मलचाहिँ अफिसका हाकिम, यो तीतोसत्य सिरियलकै कुरा हो । हाकिमसँग केही भनाभन गरेर बाहिर निस्किएका गिरीले अफिसका अन्य स्टाफसँग हाकिमलाई गाली गर्ने दृश्य थियो ।
दशैंमा दीपकराज गिरीबाट टीका थाप्दै निर्मल शर्मा । (फोटोः शर्माको फेसबुकबाट)
गालीकै क्रममा गिरीले शर्मालाई ‘गैंडा’ भनेर गाली गरे । यो कुनै योजनाअनुसार गरिएकाे थिएन । सिरियलको स्क्रिप्टमा पनि थिएन । दीपकराज गिरी अहिले पनि सम्झन्छन्, ‘निर्मल शर्मा त्यतिबेला अहिलेभन्दा पनि निकै मोटा थिए । निर्मलकाे हुलिया थियाे पेट पुक्क, गैंडा जस्ताे देखिने अनुहार, भद्दा शरीर, ठूलो पेटले गर्दा असजिलो गरि काम गरिरहेका हाकिमलाई अब के भनेर गाली गरौं भनेर सोच्दै थिए । अनायासै गैंडा भन्ने शब्द मनमा आयो । दिमाग नचलाई भने । पछि यही नाम नै स्थापित भयो ।’
गिरी र शर्मा दुवैले त्यो दिन सम्झदै भने– ‘त्यतिबेला हामी खुब हाँस्यौँ । यो सम्बोधनलाई सिरियलमा राख्ने कि नराख्ने भनेर छलफल पनि भयो । अन्त्यमा राख्ने कुरा भयो, राखियो ।’ सिरियल प्रसारण भएपछि यो नाम निक्कै लोकप्रिय बन्यो । नाम यसरी स्थापित होला भनेर न गिरीले सोचेका थिए । न शर्मालेनै सोचेका थिए ।
गिरी र शर्मा दुवैले त्यो दिन सम्झदै भने, ‘त्यतिबेला हामी खुब हाँस्यौँ । यो सम्बोधनलाई सिरियलमा राख्ने कि नराख्ने भनेर छलफल पनि भयो । अन्त्यमा राख्ने कुरा भयो, राखियो ।’
फोन सम्वादमा गिरी पुराना दिनमा फर्किए– ‘सिरियलमा निर्मल दाइ निकै कचकचे हुनुहुन्थ्यो । सानो–सानो कुरामा पनि हामी झगडा गरिरहन्थ्यौं । तर, रियल लाइफमा निक्कै कुल मान्छे हो उहाँ । झगडालु स्वभाव नै छैन । रियल लाइफमा हुँदै नभएको पक्षले रिलमा जन्माएको नाम हो ‘गैंडा’ ।
तितो-सत्य भन्दा अघि शर्मा ३ वटा फिल्मका निर्माता बनिसकेका थिए । अन्य ५ वटा सिरियलमा काम गरिसकेका थिए । दर्जनभन्दा धेरै विज्ञापनमा काम गरिसकेका थिए । शर्मालाई ‘तितो–सत्य’ त्यही एउटा श्रृंखलाले लोकप्रिय बनायो । जुन श्रृंखलामा ‘गैंडा’ क्यारेक्टर पाए ।
(कलाकार निर्मल शर्माको आज जन्मदिन हो । यस अवसरमा हामीले उनको अर्को नामको जन्म ‘गैंडा’ बारे तयार पारिएको सामग्री ।)
#निर्मलशर्मा #दीपकराजगिरी #गैँडा
बुधबार, साउन २१, २०७७ १३:०५ 'आएन खबर'मा घरदेशीको पीडा
बुधबार, साउन २१, २०७७ ०९:१९ प्रचण्ड ओलीको गाईजात्रा
मंगलबार, साउन २०, २०७७ १९:२७ ३० हजार चलचित्रकर्मी बेरोजगार
मंगलबार, साउन २०, २०७७ १०:५३ इशारामै मायामा डुबेका आकाश र स्वस्तिमा
आइतबार, साउन १८, २०७७ १३:५५ प्रकाश सपुतको बदला
आइतबार, साउन १८, २०७७ १३:१८ बसन्तको ‘साडी राम्रो’ बजारमा
फेरि जाेर बिजाेर प्रणाली, राति ९ देखि बिहानसम्म आवागमन बन्द
स्वदेश फर्किए विदेशमा अलपत्र तेह्र सय नेपाली
रानीपोखरीमा अकासे पानी पहिलो प्राथमिकतामा
विस्फोटपछि लेबनानमा तीन लाख मानिस विस्थापित
‘ओलीले नोट अफ डिफेन्स लेख्न किन नहुने ?’
स्यालुट करिश्मा दिदी ! लक्ष्मी बर्देवा
मिलानसँग साम्पडोरिया स्तब्ध